10 Inta badan Koorsooyinka Golf -ka ee Muuqaalka Yurub | Save A tareenka
Home > safarka Europe > 10 Inta badan Koorsooyinka Golf -ka ee Muuqaalka Yurub
Dooxooyinka cagaaran ee cagaarka ah iyo buuraha, cawska weyn, meelaha ugu quruxda badan Yurub, kuwan 10 koorsooyinka golf -ka ee ugu quruxda badan Yurub, waa qaar ka mid ah naadiyada golf -ka ugu sarreeya adduunka. Koorsada golf kasta waxaa loogu talagalay inay kaamil noqoto, isku darka cajiibka ah ee tas -hiilaadka iyo quruxda dabiiciga ah.
1. Golf Blue Green Pleneuf-Val-Andre Gudaha Brittany
Iyada oo leh aragtiyo aad u wanaagsan Ingiriisi Channel, koorsada golf -ka ee Bluegreen Pleneuf Val Andre waa mid cajiib ah. Koorsada golf -ka ee Bluegreen ee Brittany waa mid ka mid ah koorsooyinka ugu quruxda badan golf -ka Yurub.
Koorsada cagaaran ee cagaarka ah ayaa iska indho tiraysa xeebta Breton, iyo isku darka dhulka cagaaran iyo badda buluugga ah waa yaab. Intaa waxaa dheer, waxaad ku ciyaari doontaa mid ka mid ah 500 koorsooyinka golf -ka ugu fiican adduunka.
2. Koorsada Cusub ee Scandinavianka: Copenhagen
25 km u jirta Kobanheegan, koorsada golf -ka ee Koorsada Cusub ayaa ku jirta 50 koorsooyinka golf -ka ugu sarreeya Yurub sannad walba. Koorsada Cusub 36-dalool waa mid ka mid ah koorsooyinka golf-ka ugu quruxda badan Yurub 25 hektar oo kayn ah oo ku wareegsan.
Durdurrada keena balliyo dabiici ah, goob xasilloon oo xasilloon, iyo naadiga golf-alwaax ee abaalmarinta ku guuleystay, kaa yaabin doona iridda laga soo galo daloolka koowaad. Muuqaalku runtii waa mid aad u qurux badan wuxuuna soo jiitay dad badan oo goleyaal ah oo ka kala yimid daafaha dunida.
3. Xiriirada Golf ee Castletown: Isle of Man
Neecawda badda, ubaxa duurjoogta ah, iyo aragtida xiisaha leh ee Isle of Man, ku ciyaarida golf koorsada iskuxirka golf -ka ee Castletown waa waayo -aragnimo lama ilaawaan ah. Isle of Man waa mid ka mid ah meelaha ugu quruxda badan Yurub, iyo koorsada golf -ku waa mid ka mid ah koorsooyinka ugu quruxda badan golf -ka Yurub.
Waxaad ku hareeraysan tahay badda dhan 3 dhinacyada, intaad koorsada ku ciyaarayso gacanka quruxda badan ee Langness. Xeebta dhagaxa leh ee xeebaha, gabbaldhaca sharafta leh, darajooyinka Castletown Golf Links 8th ee koorsooyinka golf -ka ee ugu cajiibka badan UK iyo Ireland. Daloolka 17 -aad wuxuu iska indha tiraa Badda Irish, iyo aragtida godka 18aad, taariikhiga ah ee St.. Michaels Isle, 12kaniisad qarnigii th, aragtiyo laga yaabo inay mashquuliyaan golfer kasta oo khibrad leh.
4. Naadiga Golf ee Tralee: Ireland
Ku dejisan dhul dabiici ah, fiirinaya Badweynta Atlaantikada iyo xeebta, Koorsada golf -ka ee Tralee ee Ireland waa mid ka mid ah koorsooyinka golf -ka ugu gaarka iyo muuqaalka badan Yurub. Waxaad ku eryan doontaa godad ka dhan ah buuraha cagaaran oo leh aragtida buluug qoto dheer hortaada.
Koorsadan golf-ka ee 18-dalool ee quruxda badan waxay ku taal County Kerry, hoy u ah Jasiiradda Dingle, iyo Killarney qurux badan park qaranka. Koorsada golf -ka waxaa lagu dhigay cidhifyada xeeb cajiib ah, leh moorland cagaaran iyo astaanta Koonfur -galbeed Ireland.
Mid ka mid ah kuwa ugu da'da weyn, haddana casri ah oo qalabaysan, koorsooyinka golf -ka ee Yurub, koorsada golf-ka ee Crans-sur-Sierre ee Switzerland waa mid ka mid ah naadiyada golf-ka ugu quruxda badan Yurub. Balliyo dabiici ah, buuraha, iyo dooxada cagaarka leh ee cagaarka leh ee Swiss waa indho la yaab leh oo dhiirrigelin leh.
Koorsadan golf -ka ee quruxda badan waa Alps-ka Switzerland, markaa muuqaalku waa mid cajiib ah. Iyada oo leh aragtida Mont Blanc iyo Matterhorn, buuraha ugu sarreeya uguna quruxda badan Yurub, waxaad ku qasban tahay inaad la yaabto koorsadan golf -ka. Koorsada golf-ka ee Crans-sur-Sierre waa a safar tareen oo qurux badan ka fog Geneva, iyo Bern.
6. Koorsada Golf -ka ee ugu Fiican Ireland: Xiriirada Golf ee Madaxa Hore
Ku fadhiisanaya dusha sare ee Kinsale Madax, ku hareereysan badweynta, koorsada golf -ka ee Kinsale ayaa bixisa muuqaallo muuqaal ah, aragtida ugu quruxda badan dhammaan Ireland iyo UK.
Iyadoo daaqa cagaaran, dhulal qallafsan, iyo aragtida badda, muuqaalka muuqaalka ah ee Irishku ma joojiyo yaabka. Sidaas, waxaad la yaabi doontaa deyrarka yaabka leh ee koorsada golf -ka ee Old Head Kinsale. Waxaad ku ciyaari doontaa golf on a 350 milyan dhagax weyn oo ciid ah, waqooyi u wareegeysa waqtiga. Koorsadan golf -ka ee cajiibka ah waxay ku taal gobolka Cork, la socdaalashada, kalluumaysiga, Quusitaanka qulqulka, iyo qaar badan oo hawlaha bannaanka loogu talagalay dadka xiiseeya biyaha ee dekaddan nabdoon.
7. Inta badan Koorsada Golf -ka ee muuqaalka leh: Passier Golf Club Meran South Tyrol
Aragtida Panoramic ee buuraha ugu quruxda badan Yurub, Naadiga golf -ka Passier ee Meran wuxuu siiyaa waayo -aragnimo lama ilaawaan ah goleyaasha sare. Waxaa intaa dheer, oo leh muuqaalka Koonfurta Tyrol, balliyada, bakhaarro, iyo buuraha cagaaran, naadiga golf Passier wuxuu leeyahay goob iyo naqshad la yaab leh.
Intaas waxaa sii dheer, koorsada golf -ka 18 godadku waxay ku fidsan yihiin dhulka bannaan, iyo daaqa cagaaran, soo jiidato goleyaasha adduunka oo dhan wiigga golf -ka, ama baxsad dheer oo ku aaddan dabeecadda Tyrolian.
Trento oo u socda Bolzano Tareen
Milan ilaa Bolzano Tareen
Bologna ilaa Bolzano Tareen
Venice ilaa Bolzano Tareen
Inta u dhexeysa kaymaha Alpine ee qaro weyn, alwaaxyo alwaax ku wareegsan, iyo cawska, koorsada golf -ka Eichenheim waa mid ka mid ah koorsooyinka golf -ka ugu quruxda badan Yurub. Hawada alpine ee cusub, urta dabiiciga ah, iyo quruxda dabiiciga ah ayaa dhiirrigelisay ciyaartooyda golf -ka ugu fiican adduunka. Koorsada golf -ka Eichenheim ayaa leh 18 godadka, ku faafay in ka badan 6000 mitir.
Koorsadan golf -ka ee muuqaalka leh waa mid ka mid ah naadiyada golf -ka ugu fiican Austria, oo leh adeegyo heer sare ah: sauna, barkadaha gudaha iyo dibaddaba si ay u nastaan ​​ka dib tartan golf oo cajiib ah. Ma jiraan wax la mid ah muuqaalka alpine -ka oo ay weheliyaan xaalado aad u fiican si aad ugu tababarto rabitaankaaga.
9. Naadiga Gardagolf Country Club: Italy
From Manerba-Fort of the palace of Soianoto the hills of Polpenazze and castle, the Gardagolf Club offers scenic views of olive trees and Lake Garda. Koorsada Gardagolf ayaa leh 27 godadka, fidsan 110 hektar, ee gobolka Lombardy ee cajiibka ah.
Koorsadan golf -ka ee quruxda badan waxaa ku hareereysan buuraha Valtenesi, oo siinaya aragtiyo xiise leh oo soo jiidasho leh ciyaartooyda golf -ka ugu horumarsan uguna halista badan. Koorsada cas waa koorsada ugu quruxda badan Gardagolf, oo leh ubaxyo iyo geedo dhaadheer.
Trento ilaa Harada Garda Peschiera Tareen
Bolzano Bozen ilaa Tareenka Garda Peschiera ilaa Lake Garda Peschiera
Bologna ilaa Harada Garda Peschiera Tareen
Venice ilaa Lake Garda Peschiera Tareen
10. Koorsada Golf Andermatt: Switzerland
Jawhar kale oo Swiss ah, koorsada golf -ka ee Andermatt ayaa xirta annaga 10 koorsooyinka ugu quruxda badan golf -ka ee liiska Yurub. Koorsada golf -ka Andermatt waxay ku taal dooxada quruxda badan ee Switzerland. Buuraha dhaadheer dhunkashada cirka, buuraha cagaarka cagaaran, iyo muuqaalka kaarka boostada oo kale ah.
Goobtu waa mid aad u qurux badan, in xitaa ciyaartooyda aadka diiradda u saaran ay ku mashquulin karaan dooxada Ursern ee quruxda badan. Koorsada golf-ka Andermatt waxaa si qurux badan loogu naqshadeeyay inay ka mid noqoto dabeecadda waana deegaan-saaxiibtinimo. Waxaad arki doontaa durdurrada biyaha iyo cawska ubaxa oo si la yaab leh loogu daray koorsooyinka golf -ka. Waxaa jira 18 godadka laga doorto. Intaa waxaa dheer, dabaylaha buurta ee xoogga badan ayaa caqabad ku ah golfer -ka xamaasadda leh, si ay kor ugu qaadaan cayaartooda.
Bern si uu ula dhexgalo Tareen
Waxaan ku Save A tareenka wuxuu ku farxi doonaa inuu kaa caawiyo inaad qorshaysato safar hal mar ah oo aad ku tagto kuwan 10 koorsooyinka ugu quruxda badan golf ee Europe tareen.
Miyaad rabtaa inaad ku dhejiso dhejiskayaga '' 1o Inta badan Koorsooyinka Golf -ka ee Yurub '' bartaada? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmost-scenic-golf-courses-europe%2F%3Flang%3Dso< - (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)